Farshaxanka Afrikaanka laguma eka sixirka; Gumaystayaashu waxay ku guuleysteen inay fajiciyaan dhaqanka Afrika si kuwa afrikaanka ah laftooda ay usii wadaan cambaareynta dhaqankooda iyaga oo tusaale u ah dhaqanka guumaystayaasha; sidan ayaa ah sida farshaxanimada afrikaanka ah loogu hagaajiyay sixirka
Posted By: Roger Manzekelewaa: Juun 19, 2020 16: 25 No Comments
Deganayaashu waxay si nidaamsan u xadeen shaqooyinka fanka iyagoo ku qancinaya dadka afrikaanka ah, magaca diinta ama kitaabka Baybalka, in waxaas oo dhami ay ahaayeen dambi, sixir ... Akhri wax dheeraad ah
Inta u dhaxaysa dumarka Afrika ee 70-yadii iyo 2020-kii: yaa horumaray iyo yaase dib isu soo urursaday? Waxaa jira farqi qotodheer oo u dhexeeya haweenka 70-yadii iyo kuwa maanta (2020)
Posted By: Roger Manzekelewaa: Juun 8, 2020 07: 24 No Comments
70-meeyadii, dumarku waxay ahaayeen dad sharaf leh, qurux badan oo qurux badan. Waxay u labisanaayeen si xilkasnimo leh. Maanta, haweenku waa kuwo aan u qalmin, caajisiin, iyo xad-dhaaf ah. Marka taasi waa ... Akhri wax dheeraad ah
Sababtoo ah ma yaqaanaan waxay Carabtu ku sameeyeen awowayaashood. Masaajidada ayay ka buuxiyaan diinta awoowayaasha Afrika. Waxay buuxiyeen masaajidda halka Carabtu ... Akhri wax dheeraad ah
Ma ogtahay in awowayaashiin ay bilaabeen in laga iibiyo iyagoo ka yimid Carab Muslimiin ah ?? Ma ogtahay in diinta islaamka awgeed awoowayaashaa ay xasuuqeen Carabtu magaca ... Akhri wax dheeraad ah
Maadaama haweenku ay bilaabeen inay xirtaan surwaal, waxaa laga yaabaa inay jiraan rag aan faraxsaneyn. Tani waa sababta, markii falcelinta, ay gashan yihiin dharka haweenka ... Akhri wax dheeraad ah
Madow iyo caddaan midna midkoodna ma hilmaami doono dulmiga iyo dambiga ka dhexeeya ganacsiga addoonsiga. Maxaa yeelay waa dambi ka dhan ah aadanaha. Dadka aadanaha oo dhami waxay leeyihiin ... Akhri wax dheeraad ah
July 11, 2020 00: 20
July 11, 2020 00: 10
July 11, 2020 00: 00